Mifototra Amin’ny Inona Ireo Fiampangana Ho Maniratsira Ao Afovoany-Atsinanana? (Tsy fivavahana fotsiny izany) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Febroary 2019 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, عربي, 繁體中文, 简体中文, English
Ny 24 desambra 2014, noho ny lahatsoratra iray navoakany tamin'ny tambajotra, herintaona mahery izay, dia voaheloka ho faty tao amin'ny toerana famonoana i Mohamed Cheikh Ould Mohamed, maoritaniana blaogera. Io no fanamelohana ho faty voalohany indrindra noho ny fivadihana finoana tao Maoritania hatramin'ny nahazoany fahaleovantena tamin'ny taona 1960.
Tao anatin'ny lahatsorany voasoratra tamin'ny teny arabo ary mitondra ny lohateny hoe “Antokom-pînoana, ny maha-mpivavaka sy ireo mpanao asatanana”, kianin'i Cheikh ny rafitra mpanavakavaka izay manjaka ao amin'ny fireneny. Ampifandraisiny amin'ireo zavatra hafa mitovitovy aminy ireo fomba ireo izay mety efa nisy hatramin'ny fotoanan'ny mpaminany Mohammed. Samihafa ny fandikàna ny hevitry ny teniny ary izany no antony niampangàna azy ho nanevateva ny mpaminany.
“Ny raharaha an'i Cheikh” dia tsy inona akory fa fikasana mba hanampenam-bava izay rehetra mety manohintohina ny rafitra napetraka na najoro eo ambonin'ny famoretana sy ny fanaovana ny fivavahana ho fitaovana “, hoy ny bitsik’i Saidou Wane, maoritaniana mpikatroka manohitra ny fanandevozana sy ny fanavakavahana.
Raha maneho hevitra tamin'izay nanjo an'i Cheikh, ny mpanao gazety Brian Whitaker, mpanoratra ny Arabs Without God (Arabo tsy misy Andriamanitra), dia nanamarika fa navadika ho “fitaovana politika” ny fivavahana ao Maoritania:
Tamin'ny lohataona farany teo, i Arabia Saodita dia nanameloka blaogera iray, Raif Badawi, hifonja 10 taona an-tranomaizina miaraka amin'ny vely karavasy in-1000 noho ny “fanompana ny finoana silamo”. Raha ny marina, i Badawi no nanorina ny “Saudi Liberals” na ireo “Saodiana Liampivoarana” vohikala iray izay ny feo sy ny vontoatiny dia mitsikera an'ireo mpitondra fivavahana manankaja ao amin'ny firenena sy ny polisim-pinoany. Tsy tena nanisy tsindrim-peo mikasika ny finoana silamo akory ny vohikala, saingy kosa manondro an'ireo mpanao politika sy ireo olom-pinoana voafaritra mazava tsara, manasongadina tsara ny asan”izy ireo. Na izany aza, mbola voampanga ho “nanompa ny finoana silamo” ihany i Badawi.
Vehivavy mpisolovava sady mpikatroka ho an'ny zon'ireo vehivavy, Souad al-Shammari no nibitsika nanohitra ny rafitra fiahiana natao ho arahan'ireo vehivavy ao amin'ny fireneny. Raha ny marina, mba hahafahana miasa, mandeha na manambady ihany koa, tsy maintsy manana fahazoandalana avy amina lehilahy mpanaramaso iray ny vehivavy iray. Vokatr'izay, voampanga ho naneso an'ireo lahatsoratra masina sy ny mpitondra fivavahana i Souad Al Shammari
“Tsy heloka bevava ny fitenenan-dratsy ny fivavahana. Mazava be ao anaty Koràny ny fahalalahana hisafidy ; voalaza ao fa: “Tsy misy fanerena amin'ny fivavahana”. Io no nampatsiahivin'i Rached Ghannouchi, filohan'ny hetsika silamo Ennahdha Tunisie, nandritra ny hetsika iray tao Washington D.C., Etazonia, tamin'ny volana jona 2013.”
Saingy tao Washington, fa tsy tao Tonizia i Ghannouchi no nanao io lahateny io. Nahoana no lazainy fa “tsy heloka bevava ny fitenenan-dratsy ny fivavahana” nefa nalefa any am-ponja i Mejri, na ihany koa ny Ennahdha izay antokony no nanolotra lalàna iray izay hanasazy” ny fanohintohinana ny masina”? Na i Ghannouchi, na ireo antoko avy amin'ny ankolafy laika na ny antoko ankavia dia samy tsy nisy nitolona ho an'ny famotsorana an'i Mejri ary io dia noho ny tahotra ny mety ho fihetsik'ireo mponina mpandala ny fomban-drazana sy mba tsy hampandositra ireo tokony mpifidy azy.
“ireo governemanta arabo dia mitondra tena sahala amin'ny hoe tandindonin-doza ny finoana silamo… matahotra angamba izy ireo ny hirodanan'ny fanjakany,” hoy ny esoeson'ilay vehivavy toniziana bilaogera, Khaoula Frehcichi. “Tsapan'izy ireo tsara fa ny fitsikerana ireo antanantohatra ara-pivavahana dia dingana voalohany mankany amin'ny fanozongozonana ny fitondran'izy ireo.”